Hibiscus | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Kungani i-hibiscus ibizwa ngokuthi imbali yokufa
I-rose yamaShayina noma i-hibiscus yindawo yokutshala eyaziwayo futhi ethandwa kakhulu, naphezu kokuthi isikhathi eside kubhekwa izakhiwo ezihlukahlukene zamanga. Izimpawu eziningi nezinkolelo-ze zihlobene ne-hibiscus, kodwa futhi kunezakhiwo eziwusizo. Uyazi? I-red hibiscus flower ikhona ejazini lezandla zaseMalaysia, futhi enhloko-dolobha yayo kuneHibiscus Park enhle, lapho izitshalo ezingaphezu kuka-2 000 zikhula khona.
Indlela yokunakekela i-hibiscus yangaphakathi
I-Hibiscus iyimmeleli ekhanyayo yomndeni wakwa-Malvaceae, enezimbali ezinemibalabala, enhle, eyingqayizivele futhi ebushelelezi, ekhomba emaphethelweni, amaqabunga e-emerald. Isakazwe emvelweni wezhisayo. Ngenxa yobuhle bayo obungenakuqhathaniswa nokungazithobeki, kukhule kakhulu njengembali yasekhaya, i-hibiscus nayo idliwe, igqoke njengomhlobiso futhi isetshenziselwe ukwenza upende.
Ukukhethwa kwezitshalo ezinhle kakhulu kwengane yakho
Ukulinganisa igumbi lomntwana, umzali ngamunye uzama ukukhetha izinto eziwusizo kakhulu futhi eziphephile. Lokhu kusebenza nasezimpandeni zangaphakathi kwendawo yokubeletha, ngoba isikhathi eside bayoba umakhelwane wengane yakho. Sizokukhuluma ngendlela yokwenza okulungile futhi singenzi iphutha kulesi sihloko. Uyazi? Ingane ngeke ibe nesithakazelo kuphela kwisitshalo ngokwaso, kodwa futhi ebhodweni lapho lizokhula khona.
Indlela yokukhetha izimbali zasendlini ezingadingi ukunakekelwa okukhethekile
Izindlu ezingenakuzithoba ziyadingeka ukuze abantu bakhe amakhasimende angewona umthwalo wemikhiqizo. Ngaphandle kokulahlekelwa yizimfanelo ezinhle ngokunakekelwa okuncane, izimbali ezinhle ezingaphakathi ezingenakuzithoba zenza kube lula ukuzola futhi kungakhathazeki. Isilimi se-Sansevieria Teschin, umsila wase-Afrika, umsila we-pike - ngokungafani ngokuthi i-sansevieriya.
Izindawo zokwelapha ze-hibiscus
Kungani ungenayo indebe yetiye? Kodwa kufika isikhathi lapho itiye elimnyama neluhlaza liphazamisa, futhi izithasiselo ezihlukahlukene azilondolozi. Ngaphezu kwalokho, itiye eluhlaza iqukethe i-caffeine engaphezu kwekhofi, futhi inqwaba ingaba yingozi nakakhulu. Bese ufika emhlotsheni onjalo njenge-hibiscus. I-Hibiscus inezinambitheka ezimangalisayo, umbala omnandi, futhi ungalokothi ukhulume ngezinto ezizuzisayo ze-hibiscus.
Uhlu lwezinhlanzi ze-Hibiscus
I-Hibiscus kuzo zonke izinhlobo zayo zimelelwa emhlabeni jikelele. Lezi zimbali ezinhle kakhulu ezivela emndenini ovamile waseMalvova ezitshalweni zasendle nezitshalweyo zitholakala ngesimiso semithi yonyaka nonyaka ehlala njalo, esivunde neziqhumayo, izihlahla, izitshalo ezinomsoco kanye nezitshalo zasendlini. Emanzini anamanzi amaningi aseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, lapho avela khona, ungabonga amahlumela aqhubekayo efihlekile ezinamafulethi amakhulu.
Ukukhetha izihlahla ezihle kakhulu zezimbali ukunikeza
Ukubunjwa okufanelekile kanye nokuhlanganiswa kwezitshalo ezahlukene kudlala indima ebalulekile ekwakheni isimo sezakhiwo zasadini. Izitshalo ezikhethiwe kahle zezimbali zensimu ziyojabulisa iso bese zihlobisa kusukela entwasahlobo kuya ekwindla sekwephuzile. Ngosizo lwezitshalo, ungakwazi ukuhlukanisa indawo engadini, uhlukanise indawo bese wengeza ama-accents amasha kuso.